Gossip « फिल्मी नेपाल
एक समय मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा हुन्थ्यो, अभिनेत्री पूजा शर्मा र अभिनेता आकाश श्रेष्ठको प्रेम प्रसंग । हुन पनि दुबैले कुम जोडेर हिँड्थे, सार्वजनिक कार्यक्रममा एकसाथ देखिन्थे, फिल्मदेखि म्युजिक
अमेरिका भ्रमणमा रहेकी अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटिले २ दिन पहिले सामाजिक सञ्जालमा विकिनी अबतारमा तश्विर पोष्ट गर्दै ‘इन्जोइ मूड’ सार्वजनिक गरेकी थिइन् । मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालमा उनको बोल्ड अबतारले चर्चा पायो
पल शाह नेपाली म्युजिक भिडियो दुनियाँका बादशाह नै हुन् भन्दा फरक नपर्ला । सबैभन्दा बढि पारिश्रमिक लिनेदेखि व्यस्त मोडलको नाम लिँदा पल नै अग्र पङ्तिमा आउँछन् । उनै पल फिल्ममा
बुधबार बिहानदेखि मिडियामा चर्चा छ अभिनेता निखिल उप्रेती र राजेश हमालबीच टिमअपको समाचार । लामो समयपछि हमाल त निखिल एकसाथ फिल्ममा देखिँदै गरेको दाबी सहितका समाचार आइरहेका छन् । तर
नेपालमा स्टारडम बोकेको कोहि हिरो छ भने निसन्देह नाम आउँछ अनमोल केसी । नामले दर्शक हलमा तान्ने क्षमता बोकेका यी अभिनेता प्रायः गुमनाम हुन्छन् । फ्यान र मिडियाबाट टाढा हुन्छन्
अभिनेता सुशिल श्रेष्ठ नेपाली फिल्म क्षेत्रमा उदाउँदै गर्दा अभिनय भन्दा पहिले सुगठित शारिरिक बनावटले चर्चामा आएको नाम हो सुशिल श्रेष्ठ । ‘होस्टेल रिटर्न्स’ डेब्यू अभिनेताको फिल्म पहिले ‘सिक्स प्याक’ चर्चा
निर्देशक दिवाकर भट्टराई गत बर्षको फागुनमा फिल्म ‘क्याप्टेन’ रिलिजपछि यतिबेला फुर्सदमा छन् । तर हालै बाहिरिएको एक खबरले उनि नयाँ फिल्मको तयारीमा जुटिरहेका छन् । ‘तिमीसँगै हुने मन छ’ नाम
अभिनेता अर्यन सिग्देल स्टारर फिल्म ‘हजार जुनीसम्म’ यतिबेला हलमा प्रदर्शनरत छ । बिहिबारबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्मले आफ्नो पक्षमा दर्शक जुटाउन संघर्षरत छ । फिल्म पछिल्लो केहि महिनासम्म सुनसान बनेका हलमा
जसिताको रोजाइ अनमोलदेखि आशिरसम्मः प्रदिप ट्याग हटाउने जुक्ती ?
‘लिलिबिली’ डेब्यू गर्ल जसिता गुरुङले पहिलो फिल्मबाट नै तारिफ भेटिन् । प्रदिप खड्काको अपोजिटमा देखिएकी जसिताको कामले प्रशंसा भेट्दा प्रदिप र उनको लभ अफेयरसम्मका गसिप पनि सिनेवृत्तमा चले । हालसम्म
सकिएको हो ऋचा अर्पण सहकार्य ?
अभिनेता तथा निर्देशक अर्पण थापा र अभिनेत्री ऋचा शर्माबीचको दोस्ती पछिल्लो बर्ष गज्जबको देखियो । यो बर्ष पनि यो जोडी एकसाथ रहेका केहि फिल्म प्रदर्शन भए, निर्माण पनि भए ।
‘झिँगेदाउ’को ‘आगो बिना बिँडी जल्दैन’मा मुकुन र कुशलसँग आँचल र केकीको ठूम्का |भिडियो